३ दिनमै मात्र ३ सामाग्रीको प्रयोग गरी अनुुहारको चाउरीपना हटाउने निकै सरल उपाय - Enepal Serofero
३ दिनमै मात्र ३ सामाग्रीको प्रयोग गरी अनुुहारको चाउरीपना हटाउने निकै सरल उपाय
जवानीको नापतौल अचेल उमेरले होइन, उसको स्वास्थ्यले निर्धारण गर्छ । आफूलाई फिट राख्न सकेर उमेरले ५०को नेटो काटेर पनि जवान देखिने धेरै छन् । त्यस्तो गर्न नसकेर ३०कै छेउछाउमा अनुहारमा चाउरी पार्ने पनि छन् । जवान देखिन छालालाई जवान राख्नुपर्छ । छाला तन्दुरुस्त राखेर जवान देखिने केही सजिला तरिका यसप्रकार छन् ।
१) हाम्रो शरीर र छालामा रहेका कोषिकाहरू पुरानो भएर मर्ने र नयाँ उत्पन्न हुने क्रम जारी रहने गर्छ । नयाँ कोषिका बढी सिर्जना भयो भने छालाको चमक कायम रहन्छ । छालामा चाउरी नपरोस् भन्नका लागि स्वास्थ्यकर र ताजा खाना खाने गर्नुपर्छ । यसले नयाँ कोषिका सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ ।
२) छालालाई स्वस्थ र जवान राख्न यसलाई पानीले सिञ्चित गरिरहनुपर्छ । शरीरमा पानीको मात्रा कम भयो भने छाला सुक्खा र अनाकर्षक बन्न पुग्छ । छालाको सुन्दरतालाई कायम राख्न र उमेर ढल्किँदै गए पनि यसको चमक गुम्न नदिन प्रतिदिन तीनदेखि चार लिटर पानी पिउने गर्नुपर्छ । यसरी पानी खानाले छालालाई खराब गर्ने ‘टक्सिन’हरू पसिना र पिसाबबाट बाहिर जाने गर्छन् ।
३)हर्बल र ग्रिन टीमा एन्टिअक्सिडेन्टको मात्रा उच्च हुन्छ । यसले छालाको बुढ्यौली घटाउने गर्छ
४)कफी पिउने गर्नुभएको छ भने र उमेर घर्किंदै जान थालेको छ भने तुरुन्तै हर्बल र ग्रिन टीको बानी लगानुहोला । कफी र अन्य क्याफिनयुक्त पेय पदार्थले शरीरलाई डिहाइड्रेट गराउँछ । जसकारण अनुहारको चमक हराउन पुग्छ । साथै, कफी खानाले मानसिक तनावसमेत बढ्छ । जसले छालालाई थप बिगार्ने गर्छ ।
५) कफी बढी खानाले शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन्छ । त्यही भएर कफी बढी खाने मानिस चाँडै बुढोजस्तो देखिन थाल्छ, छाला चाउरिन थाल्छ
६) नियमित व्यायाम गर्नाले मानिस जवान देखिन्छ । व्यायाम गर्दा शरीरमा रक्तसञ्चार र श्वासप्रश्वास तीव्र हुन्छ । यसले शरीरका हरेक कोषिकामा पोषक तत्व पु¥याउने गर्छ । साथै, तीव्र श्वासप्रश्वास र रक्तसञ्चार हुँदा शरीरमा अक्सिजनको इन्टेक पनि बढ्न पुग्छ । यसले छालालाई सुक्खा हुन अथवा चाउरी पर्न दिँदैन ।
७) तनाव लिनाले शरीरका विभिन्न कोषिका नष्ट हुन्छन् । यस्ता कोषिका नष्ट भएमा छाला झोल्लिएजस्तो देखिने, दाग देखिने, चाउरी देखिने, छाला रुखासुक्खा हुने लगायत हुन्छन् । तसर्थ, ध्यान, योग, जगिङ, गार्डेनिङ, घरपालुवा जनावरसँगको घुलमिल, खेलकुद आदिले तनावको मात्रा घटाउँछन् । जसको सीधा असर पर्छ, छालाको सुन्दरतामा ।
Prevनेपालकै पहिलो वैज्ञानिकले बनाएको ‘बिर गन’ ३०००० डलर मा बिक्रि, कसरि पुग्यो अमेरिकामा? (भिडियो सहित)
Nextविवाहित महिला / पुरुष किन सल्किन्छन् अरुसित ?
राजधानीमा अचम्मको बलात्कार – सुन्दा तपाइको होस् उड्छ! (10,096)